Ciidamada Booliska oo Howlgalo ka sameeyey Xaafadaha Muqdisho - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Ciidamada Booliska oo Howlgalo ka sameeyey Xaafadaha Muqdisho
May 30, 2019 admin319
Saraakiisha Ciidamada Booliska Soomaaliya ayaa waxaa faah faahin ay ka bixiyeen howlgalladii ugu dambeeyay ee Ciidamada Booliska ay ka sameeyeen degmoyin ka tirsan gobolkan Banaadir,howlgalladaas dad badan lagu qabqabtay.
Taliye kuxigeenka Ciidamada Booliska Soomaaliya Zakiya Xuseen ayaa sheegtay in dad ku guda jiray falal Amnidarro laga soo qabtay degmooyinka,Warta-Nabada, Wadajir, Yaaqshiid,Hodan iyo degmooyin kale oo ka tirsan Gobolkan Banadir.
Waxa ay sheegtay in Maalintii Isniinta ee todobaadkaan howlgallao laga fuliyey degmooyinka,Wadajir iyo Hodan lagu soo qabtay 5 ruux oo looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen dil ka dhacay degmada Wadajir ee Magalada Muqdisho.
Sidoo kale Maalintii Axada aheyd in Ciidamada Booliska ay ka qabteen degmada Warta-nabada saddex Ruux oo watay Mooto Bajaaj,isla markaana baaris kadib la ogaaday inay yihiin Burcad,sidaasina Xabsiga lagu dhigay.
Marka laga soo tago hadalka Taliye kuxigeenka Ciidamada Booliska Soomaaliya Zakiya Xuseen ayaa waxaa jirtay in todobaadkaan Gudihiisa Magalada Muqdisho siyaabo kala duwan loogu dilay in ka badan 10 ruux,balse aan weli dad loo qaban.
Xaaf oo xiriirka u jaray Dowladda Dhexe
Sawirro: Xildhibaan lagu Qarxiyey Waqooyiga Galkacyo